Maalinta: 19 November 2019
Wasiir Ku-xigeenka Warshadaha iyo Technology Mehmet Fatih Kacar, xarunta ugu horeysay Turkey ee tababarka Gökmen Aerospace Xarunta Tababarka meel Kaapelitalo ah (GUHE I) oo ahaa baaro. Turkey socodkeed carruurta duurka aerospace ah [More ...]
Belt Road ee Turkey, wadada Russia ayaa albaabka MI? Project Road Belt ka leexinayn ee Shiinaha ee tareenka ugu horeeyay ee Europe sii wadaan in ay u baxaan eg Turkey. Central Corridor kuwaas Turkey, Shiinaha - dhexeeya Europe [More ...]
Magaalada Istanbuul, in kabadan kun kun oo qof oo ah 595 qof ayaa safray habeenkii tareenka dhulka hoostiisa mara. Saraakiisha dowladda hoose ayaa sheegay in dakhligu ka sareeyo waxyaabaha la filan karo. Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul (IMM) 30 ayaa biloowday Agoosto iyada oo loo yaqaan 'metro 595' habeenkii [More ...]
ISAF 2020 Isudiyaarinta hormarinta layaabka leh; Tallaabooyin dhowr ah oo ka horreeya qaybta, ISAF 2020 ayaa isku diyaarineysa iyada oo la yaab weyn ku ah dhammaan kaqeyb galayaasha iyo booqdayaasha raba in ay raacaan horumarka. 8-11 2020 Oktoobar 24. Mar ayaa dhici doona [More ...]